Manan-danja ny habe [isa]: Maha-te-hiresaka hoe aiza ny hitsiny ny vakisiny nomen’i Etazonia ho an’i Trinite & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Toa tsy ampy ny tavoara 80
Voadika ny 12 Jolay 2021 5:33 GMT
Saripikan'i Marco Verch Mpaka Sary Matihanina ao amin'ny Flickr, CC BY 2.0. Photo by Marco Verch Professional Photographer on Flickr, CC BY 2.0.
Tamin'ny 13 Jona, nisioka ny masoivohon'i Etazonia any Trinidad sy Tobago fa nanao fanomezana vaksiny ho an'ny firenena nosy kambana ao Karaiba ny governemantany – sioka iray izay nahazoana fanehoan-kevitra miisa 2.500 sy tsonga sioka miisa 8.574, izay miiba ny ankamaroany:
Nanome vaksiny an'i Trinidad sy Tobago i Etazonia
Tsy ny fanomezana manokana no fanakianana lehibe avy amin'ireo mpisera Twitter, fa ny habetsany (isany) mifandraika amin'ny isan'ny mponina ao amin'ny firenena izay eo amin'ny 1.4 tapitrisa eo ho eo, ka niteraka resabe an-tserasera momba ny hitsiny (fitoviana) amin'ny vaksiny sy ny andraikitry ny “firenena voalohany manerantany” amin'ny fizarana vaksiny manerantany:
Vaksinina ampy ho an'ny olona 240 ity fanomezana ity.
Manana mponina 1.4 tapitrisa i Trinidad and Tobago.
Ka vaksiny ampy ho an'ny 0,017% ao amin'ny firenena izany.
Mandritra izany, manana daozy 66 tapitrisa mipetraka ao anaty vata fampangatsiahana i Etazonia ankehitriny.
Tsy mila ankalazaina izany. Tsy ampy izany.
(Raha ny marina, dia ampy ho an'ny daozy 400 amin'ny vaksininy ny tavoara (fatra) nomena.)
80… tavoara. Ahitana tavoara 195 isaky ny boaty ireo boaty misy ireo tavoara Pfizer. Tsy nandefa boaty iray feno akory i Etazonia.
Nanohitra mafy ilay sioka ny mpisera Twitter, marobe ireo valinteny avy amin'ny mpiserasera any Etazonia, Fanjakana Mitambatra, India sy ny firenena hafa, izay nanjakan'ny resadresaka momba ny hantsana eo amin'ny vaksiny, na dia manohy mampitombo ny fanapariahana ny vaksininy aza ireo firenena tavaratra ankapobeny.
Noresahan'ny fihaonana an-tampon'ny G7 farany teo ny resadresaka toy izany, izay nampanantenan'ireo mpitondra ao amin'ny fanjakana mpikambana vaksiny COVID-19 1 miliara ho an'ny “firenena mahantra” ao anatin'ny herintaona – tanjona iray izay tratran'ny tsikera, indrindra avy amin'ny tale jeneralin'ny Firenena Mikambana eo amin'ny Fahasalamana (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus::
Fanampiana lehibe izany, saingy mila bebe kokoa isika, ary mila azy ireo haingana kokoa. Amin'izao fotoana izao dia mandeha haingana kokoa ny viriosy noho ny fanaparitahana vaksiny manerantany. Maherin'ny 10000 ny olona maty isan'andro […] mila vaksiny ireo vondrom-piarahamonina ireo ary mila izany ankehitriny fa tsy amin'ny taona ho avy.
Navoakan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana hafa sy ny mpitondra eran'izao tontolo izao ny heviny, mihevitra izy ireo fa tsy ampy izany antoka izany ary tsy hahatratra ireo mila vaksiny maika.
Mifanohitra amin'izany kosa, mpampiasa Twitter iray nanamarika fa i India, ohatra, dia nalala-tanana lavitra tamin'ny fanomezany vaksiny ho an'i Trinite sy Tobago:
Amerika dia miresaka 💰💰 ary India ❤❤❤❤
Nanome vaksiny miisa 80 i Amerika mifanohitra amin'ny vaksiny 40000 avy tamin'i India
🇺🇸 <<<< 🇮🇳
Mandresy ny politika Voalohany an'i Amerika.
Ny hafa nivazivazy hoe:
Heveriko fa nanome tavoara fanampiny ianao. Avereno ny sasany
Mitovy amin'ny “eritreritra sy vavaka 🙏” izany
Mpisera media sosialy sasany nahatsapa fa tsy tokony hijery momba ny fanomezana ity firenena ity, na inona na inona haben'ny fanomezana:
Mbola tsara kokoa ny antsasaky ny sandwich noho ny tsy misy, sa tsy izany?
Tsy niombon-kevitra ny hafa:
Mety ho tsara kokoa ho anao ny tsy mandefa mihitsy satria tena manompa ity
Sangisangy tanteraka ity, maninona no atao dokambarotra izany?
Niteraka korontana ilay sioka tany Trinidad sy Tobago, saingy nanazava haingana ny minisitry ny filaminam-pirenena ao Trinidad sy Tobago, Fitzgerald Hinds fa natokana ho an'ny mpiasa ao amin'ny minisiterany ilay fanomezana. Raha nahazo vaksiny ny mpikambana tao amin'ny sampam-piarovana tamin'ny volanaAprily teo, dia nanamarika ny minisitra Stuart Young fa “tsy ny olona rehetra no [hahazo] ity vaksiny [fihodinana voalohany] natolotra ho an'ny filaminam-pirenena ity.”
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny radio i95 FM, nanampy ny minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny CARICOM, ny Dr. Amery Browne, fa “fanomezana kely” avy amin'ny “sampam-piarovana iray ho an'ny mpiara-miasa aminy izay iarahany miasa akaiky any Trinidad sy Tobago ity […] raha ny fahafantarako dia tsy isafatsiroa ity karazana fandaminana manokana ity. “
Afaka nampitombo ny fanapariahana ny vakisininy tao anatin'ny roa volana lasa i Trinite sy Tobago tamin'ny fanomezana avy any Shina, India, St. Vincent sy the Grenadines, Bermuda ary Grenada. Ankoatra ireo fanomezana ireo, ny andro nandefasan'ny masoivoho amerikana ny siokany nampiady hevitra, nanambara ny ambasadaoro Shinoa any Trinidad sy Tobago fa ho avy ny vakisiny maherin'ny 200.000 avy any Shina:
Faly aho manome vaovao farany fa eny an-dalana ho any PoS ny fandefasana vaksiny Sinofarm 200k daozy hohafaran'ny governemantan'i T&T! Faly izahay nasaina handray ity vaksiny Sinopharm faharoa ity rahampitso eny amin'ny seranam-piaramanidina!
Mandritra izany fotoana izany, nanamarika ny lefitra lehiben'ny iraka ao amin'ny masoivohon'i Etazonia ao Trinite sy Tobago, Shante Moore, fa miampy tavoara 80 ny vaksiny izay nampanantenain'ny fitondrana Biden-Harris ho an'i Amerika Latina sy Karaiba mba haparitaka araka ny isan'olona.
Na dia mahazo tombony amin'ity fanomezana lehibe nampanantenaina ity aza i Trinidad sy Tobago, nanamafy fotsiny ny fahasosoran'ny olona maro ny siokan'ny Masoivohon'i Etazonia raha ny hantsana amin'ny vaksiny no resahina. Na izany aza, araka ny asehoan'ity fifanakalozana Twitter teo amin'i Patrice Grell sy Karen Walrond ity – samy mpikambana ao am-pielezana Trinbagonianina monina any Etazonia no jerena- dia misy ny fanantenana:
Raha ny tenin'i dadanay dia nandà ny “hangataka fanampiana” ny PM. Mampalahelo ny tavoara valopolo, nefa manantena isika fa hampiakatra ny fahalalahan-tanany i Etazonia, ary hanaiky izany amin-katsaram-panahy i Trinite.